Umshini Wetshe, Umshini Wokwenza Amatshe - UJoborn
Imishini Yetshe LaseShayina
Umshini Wokusika Amatshe
Stone wokucwebezelisa Machine
Umshini Wokwakha Amatshe
Omunye Umshini Wetshe
Ikhwalithi yokuqala iyinjongo yenkampani yethu inkampani yamisa umnyango wokulawula ikhwalithi ochwepheshe, ifakwe imishini yokulinganisa yokuthuthuka yamazwe omhlaba, inqubo eqinile yokuhlola, kusukela ekuthengeni izinto ezingavuthiwe kuya kugcina lomkhiqizo ophelile.
JOBORN IMISHINI CO., LTD. itholakala "eChina stone city" -china, shuitou, ithatha indawo engaba amahektare angama-60, enamamitha ayisikwele angaphezu kwezi-20,000 ezitshalo ezijwayelekile zanamuhla nangaphezulu kwamamitha-skwele angama-4000 esakhiwo sokuphatha, ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nensizakalo komunye wabakhiqizi bemishini yokukhiqiza itshe. Kuqongelelwe ulwazi oluningi, ubuchwepheshe obumnandi kanye nezinsizakalo ezizungeze amabanga zero ukuqinisekisa ukuthi inkampani ithola idumela elihle lemakethe.
Chofoza ukuze ufunde kabanzi
Okugxiliswe kubantu, Ikhwalithi yokusinda, Ukunqoba ngokugqwesa, Uhlelo olusha lokuhlawulisaNgaphezulu kweminyaka engama-20 yesipiliyoni esicebile, ubuchwepheshe obuhle kanye nezinsizakalo ezingekho kude eziqinisekisa ukuthi inkampani ithole idumela elihle lemakethe.
Unjiniyela wobuchwepheshe osebenza ngokuzinikezela ukukuqondisa
Ngokuya ngezidingo zakho zangempela, khetha izinqubo zokwakheka nezokuhlela ezinengqondo kakhulu
UFujian Joborn Machinery Co., Ltd.
IHailian Pioneer Park, iShuitou Town, idolobha laseNan'an, esifundazweni saseFujian